February 2013 - iftineducation.com
iftineducation.com – Golaha Wasiiradda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii joogtada ahaa, waxaana shir guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), iyadoo looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen warbixino laga dhagaystay Wasiiro ka soo noqday safaro shaqo oo ay ku tageen dalalka Suudaan iyo Ethiopia, Amniga, iyo Ansixinta Tariifo ku meel gaar ah…
iftineducation.com – Beribaa nin Soomaali ah oo marqaansan ayaa askari keenyaanihi qabtay xili uu ku kaadshayey meel luuq ah. Ninkaan Soomaaliga ah maba iska fiirin meesha uu ku kaadshayo oo waxaaba ku qoran’ haku kaadin halkaan hadaad ku kaadisidna 500 ayaa lagu ganaaxayaa. Askarii ayaa ku yiri nin kii Soomaaliga ahaay ganaa xaagu waa Shan boqol ee soo bood hadii kale…
iftineducation.com – Safiirka dalka Jarmalka Soomaaliya ayaa daqiiqado kadib markii warqadaheeda aqoonsiga uu ka dugudoomay madaxweynaha Soomaaliya ayaa goobtii saxaafada loogu sheegayay in ay masuulka ugu sareeya safaadara Jarmalka ee Soomaaliya waxa ay uga habaawday calankii dalkeeda. Waxa ay isku aadisay Calanka Midawga Yurub taas oo qasab uga dhigtay Safiirka Midawga Yurub isna in uu fariisto kursi aan calan ku aadaneyn…
iftineducation.com – Dhaq-dhaqaaqa Somaaliyeed Nabada,midnimada iyo cadaalada codka wadaniyiinta damiirka,dareenka nool,qiirada dal jaceyl,karaamo difaacdi u taagan,ma daalayaasha Diintooda,dalkooda iyo midnimdo cadaalad leh illaaliyaasha ah,gunimo,gumeeysi hoos joogid,dayaca kala daadsanaanta.qabyaalad ku dhaqmida,colaada iyo dagaaladda Sokeeyeey diidan, dembiilayaasha,gacan ku dhiiglayaasha,qabqablaha. Dagaal oogayaasaha iyo guud ahaanba inta tacadigga,xasuuqyadda iyo falalka gumaad ku eedeeysan ku talinaaya Maxkameeyn habka cadaalada waafaqsan,isu celinta dhantida dadka ku kala maqan iyo mida dowladeedba. Dhaq-dhaqaaqa Somaaliyeed codka dadka…
Xarakada alShabaab oo War-saxaafadeed ka soo saartay doorashooyinka dhowaan ka dhacaya dalka Kenya
iftineducation.com – Xarakada Al-Shabaab ayaa soo saartay bayaan ku aadan doorashooyinka todobaadyada soo socda lagu wado iney ka dhacaan dalka Kenya, kuwaasoo loolanku musharaxiinta hardamaya uu saameyn ku leeyahay ciidamada dalkaas ee soo galay Somalia. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay mudada 5-tii sanadood ee Xarakada Alshabaab ay ka arriminayeen dhulka ku teedsan xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya in nabad-galyo buuxda ay heysteen dadka…
Madaxweyne Xasan “Kiiskii Wariye C/casiis Koronto waxay na baday Sumcad xumo weyn”
iftineducation.com – Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta waxa uu kulan kula qaatay Xafiiskiisa laamaha Garsoorka Dalka isagoo ka dhageystay warbixino hay’adaha Garsoorka. Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ku dheeraaday inay jirto baahi weyn oo akabka garsoorayaasha ku shaqeeyn lahaayeen oo udhameystirneyn. Waxa uu sheegay madaxweyne Xasan in xilligaan lagu jiro garsoorka dalka ay qabteen shaqooyin badan hayeeshee dhaliilay habka…
iftineducation.com – Madaxda sare ee dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wakhti dhaw lagu dhawaaqi doono in ay furan tahay wadada isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Raysalwasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax shirdoon (Saacid) iyo wasiirka Gaashaandhiga ayaa sheegay in wakhti kooban ay ka hartay furitaanka wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Dowlada Federaalka ayaa guul ku…
iftineducation.com – Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa ka dhacdey Jaamacadda PSU ee magaalada Garowe, xafladda ayaa loo dhigey 23 aredey oo ka qalinjebiyey Kuliyadda Sharciga & Qaynuunka ee Jaamacadda PSU. Guddoomiyaha Jaamacadda PSU Maxamuud Shiikh Xaamud oo xafladdii qalin-jebinta ka hadley ayaa ugu horeyntii u mahad naqay hay’adda UNDP oo uu sheegay la’aanteed in aysan kuliyaddu socoteen,…
iftineducation.com – Wararka kasoo baxaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta uu furmi doono shirkii maamulka loogu sameenayey gobalada Jubbaland oo abaabulikiisa in muddo ah soo socday. Shirweynaha maamulka Jubbaland la doonayo in lagu dhiso ayaa lagu wadaa inuu ka furmo xarunta Jaamacada Kismaayo. Xarunta Jaamacada Kismaayo Magaalada Kismaayo ayey todobaadyadii lasoo dhaafay soo gaarayeen wafuud…
Shiicada oo ka digay in mucaaridka Siiriya uu la wareego Awooda dalkaasi
iftineducation.com – Hogaamiyaasha Shiicada ee dalalka Ciraaq iyo Lubnaan ayaa si kala gooni gooni ah u soo saaray baaqyo ay uga digayaan xiisadaha ka taagan dalka Siiriya. Xassan Nasruallah oo ah hogaamiyaha Kooxda shiicada XisbuAllah ee awooda ku leh dalka Lubnaan ayaa telefishinka kooxdiisa wareysi uu siiyay sheegay in xoogaga mucaaridka ah ee ka dagaalamaya dalka Siiriya ay si gaar ah…